सन् २०१८ मा कसले कति कमाए ?
एजेन्सी, १८ पुस । खेलकुद जगतमा एकसे एक स्टारहरु छन् जसको कमाइको जहिल्यै चर्चा हुने गर्छ । यहिँ कमाइकै कारण उनीहरुको जीवनशैली दुनियालाई डाहा लाग्ने किसिमको छ । आज हामी तपाइँलाई सन् २०१८ मा कसले कति कमाए भन्ने बारेमा शिर्ष स्थानमा रहेका केहि खेलाडीको बारेमा जानकारी दिनेछौं ।
१. फ्लोयड मेवेडर:
२०१८ मा सबैभन्दा धेरै कमाउने पुरुष खेलाडीको सूचीको पहिलो नम्बरमा छन्, अमेरिकी बक्सर फ्लोयड मेवेडर । हेभिवेट बक्सर नभए पनि उनी उत्तिकै नाम र दाम कमाउने खेलाडी हुन् । फोब्र्सका अनुसार उनले सन् २०१८ मा २७ करोड ५० लाख डलर भन्दा बढी कमाए । त्यसमा व्यापारिक प्रायोजनबाट प्राप्त १० करोड डलर जोडिएको छैन ।
२. लियोनल मेसी:
बार्सिलोनाका कप्तान लियोन मेस्सी यो सूचीको दोस्रो नम्बरमा छन् । अर्जेन्टिनाका मेस्सीले २०१८ मा पारिश्रमिकका रूपमा ८ करोड ४० लाख डलर बुझे । त्यस्तै उनले २ करोड ७० लाख डलर अनुबन्धबाट प्राप्त गरे । बार्सिलोनाका खेलाडीको रूपमा उनका लोकप्रियता बढी छ ।
रोनाल्डोलाई मेस्सीका प्रतिस्पर्धीमारुपमा हेर्ने धेरै छन् । उनीहरु दुई मध्ये को उत्कृष्ट भन्ने विषयमा बेलाबेला चर्चा हुने गरेको छ । सन् २०१८ मा सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको तेस्रो स्थानमा पोर्चुगाली खेलाडी रोनाल्डो छन् । वर्षको आधा समय रियल मड्रिडका लागि खेलेका रोनाल्डो अहिले इटालीको युभेन्ट्ससँग आबद्ध छन् । उनले यो वर्ष ६ करोड १० लाख डलर पारिश्रमिक प्राप्त गरे भने अनुबन्धबाट ४ करोड ७० लाख डलर पाए ।
कोनर म्याकग्रेगर २०१८ मा सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको सूचीको चौथो स्थानमा छन् । आयरल्यान्डका म्याकग्रेगर खासमा मिक्ड मार्सल आर्टसका खेलाडी हुन् । कोनरले यो वर्ष खेलेरै ८ करोड ५० लाख डलर कमाए । उनले व्यापारिक प्रायोजनबाट थप १ करोड ४० लाख डलर प्राप्त गरे ।
सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको सूचीको पाँचौं स्थानमा छन्— नेयमार । ब्राजिलीयन फुटबल खेलाडी नेयमार अहिले फ्रेन्च लिग वान टिम पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) बाट खेल्छन् । उनले सन् २०१८ मा पारिश्रमिकबाट ७ करोड ३० लाख डलर प्राप्त गरे भने व्यापारिक अनुबन्धबाट १ करोड ७० लाख डलर कमाएका छन् ।